Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - May 20 - site website - jluis37.com
Arsenal vs Brighton & Hove Albion – 1 × 2 & Otu Abụọ Icheta – Arsenal & Ee @ 3.15
Ndị Gunners enweela oge dị egwu, na-apụ na Europa League ma na-efu ndị isi anọ ọzọ. Website t nke ahụ, akụkụ Mikel Arteta enwetala isi nke abụọ kemgbe ụbọchị Boxing, nken’onwe un bụ mmezu ziri ezi. Agbanyeghị na Njikọ Njikọ adịghị eru, ebe ikpeazụ Europa Njikọ bụ ihe a ga-enweta, yana ndị na-agba ọsọ mpaghara d e Tottenham na-egwu Leicester pụọ na Everton na-eche ndị mmeri ahụ ihu Manchester City. Ga-atụ anya na Spurs ma ọ bụ ndị Toffees agaghị ewere isi ihe zuru oke d e egwuregwu ndị ahụ, na-emeghere ọnụ ụzọ maka Arsenal ịbanye na 7th. Ihere nke ịghara ime Europa Njikọ Ikpeazụ na atụmanya nke ịmeghị nnukwu asọmpi European kemgbe 1996 nyere ha ndụ ọhụụ ọhụrụ na njedebe oge. Brighton abụrụla ndị otu egwuregwu maka ndị Gunnersn’oge na-adịghị anya, mana ị ga-eche ọtụtụ ihe ị ga-egwu maka na imegide otun’akụkụ naanị mpako na akara ahụ, Arsenal kwesịrị imeri ebe a. Website Id Seagulls na-agbanye atọ megide City oge ikpeazụ, anyị ga-atụ anya ka ha nweta opekata mpe otu na Emirates. Mana Arsenal kwesiri ịdị oke mma. 1 nkeji.
Leeds Vs West Brom – Nkwarụ – Leeds -1 @ 1.62
Abụọn’ime oge ikpeazụ that a na-akwalite ìgwè na-aga isi na-enwe ọgaranya dị iche ichen’oge a.’Large Sam’s’ West Brom na-alaghachi na Championship mgbe oge ga-echefu. Ha ekwela nkwa ịgbada ruo ọtụtụ izu ugbu a, nke ahụ ahụla ọgụ ọ bụla ha hapụrụ ka ọ dị ka ọ ga-apụ na ha, na mmeri atọ dị n’usoro megide Arsenal, Liverpool na West Ham. Leeds n’aka nke ọzọ abụwo otu egwuregwu nke EPL, ebe ha nwekọtara isi karịa ndị otu ọzọ n’egwuregwu iri gara aga. Ihe’Bielsa na-ere ọkụ’ na-ekwu t o mechiri ọnụ, un t Leeds gbasiri ike ma sie ike ka oge ahụ gara. Ha emeriela nke ikpeazụ n’usoro, na-eti Spurs, Burnley na Southampton egwu, ha ga-achọkwa igosi ihe ngosi maka ndị na-alọghachi Leeds, ndị a ga-ahapụ ka ha gaa egwuregwu EPL na Elland Road maka nke mbụ oge a oge. Nke a nwere mmeri ụlọ edere na ya niile, na ịtụle ụdị West Brom n’oge na-adịbeghị anya na-atụ anya ka Leeds tinye ha ole na ole. Leeds -1 t even nsogbu megide anya dị mma nzọ. Nkeji 2.
UFC Fight Night – Rob Font vs Cody Garbrandt – Mmeri – Garbrandt @ 2.00
Cody”Enweghị”hụnanya” Garbrandt nwere ndekọ 12-3 siri ike, abụọ nke ọnwụ un na-abịa megide oge mbụ UFC Bantamweight onye mmeri TJ Dillashaw. Ikekwe onye amara nke ọma maka anụ ehi un t onye ọzọ bụbu UFC Bantamweight onye mmeri Dominick Cruz, onye ọ kụrụ ma have been eriri ahụ, Garbrandt bụ onye na-agbanye aka na nkewa ya. Garbrandt anọwo napụrụ anya n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ mgbe ọ gbasịrị ọgụ na ọgụ siri ike nke ‘COVID-19’. Rob Font agbadatala oge ọ bụla ọ nwere ihe ịga nke ọma d e ndị UFC, anyị na-atụpụtakwu otu ihe ahụ ebe a ka ọ na-ebuso asọmpi ndị ọkachamara. Ihe isi ike nke Garbrandt na-esite n’ụdị adịghị mma ya, ma ghara igosipụta uru ọ bara na Octagon. Okwesiri imecha Rob Font ma megharia onwe un dika ndi isi. 1 nkeji.
Washington Wizards na Indiana Pacers – Oge ọkara / Oge zuru oke – Washington / Washington @ 1.98
Egwuregwu niile dị mkpa d e egwuregwu na-abịa ná njedebe d e East dị ka Washington na-eche Indiana ihu iji chọpụta onye mechara na mkpụrụ nke 8, si otú a nweta ikike ihu ndị 76ers na nke mbụ nke egwuregwu. Washington nwere obi ike na mmeri megide Celtics tupu izu a, na-eme otu n’ime ndị isi ha Bradley Beal n’okpuru igwe ojii mmerụ ahụ. Ha nwere n’ezie ụzọ iji meziwanye. N’aka nke ọzọ, Indiana gbagburu ndị otu Charlotte dara ogbenye nke ukwuu na nchekwa. Nsonaazụ a bụtụ ihe ịtụnanya nyere akụkụ ahụ, ọkachasị na-enweghị Caris Levert, onye ga-agbaghara egwuregwu egwuregwu nke abụọ n’ihi usoro COVID-19. Otu abụọ that a zutere ugboro atọn’oge a, yana ndị Wizards na-apụtan’elun’ime ha atọ, ha atọ niile nọkwa d e ncheta ahụ, ebe ọ bụ d e ha niile na-egwuri egwu na mbubreyo March ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Russell Westbrook t even egwuregwu ndị that a ruru 27, 18 na 20 – mkpari. Ọ ga-achọ ịlaghachi azụ mgbe egwuregwu dara ogbenye na Boston. M na-ebu amụma nnukwu ọrụ Pacers ịlaghachi n’ụwa, na nzaghachi siri ike sitere n’aka Russ na Beal iji hụ Wizards na-eduga n’ụzọ niile. 1 nkeji.
USPGA Championship 2021 – shirt 20 – Tyrell Hatton @ 2.95
Nọmba ụwa itoolu (nke na-ekwe nkwa ozugbo) nwere mmalite dị ukwuu d e 2021 rutere asọmpi Abu Dhabi nke European Tour a ma ama na Jenụwarị. Formdị un adịghị mma dị ka ọ gaara achọ na 2021 mana T18 un t ndị Nna-ukwun’ọnwa gara aga (afọ 4 gara aga: MC-44-T56-MC-T18) na-atụ anya na mbugharị na-agba mgba maka isi. Agbanyeghị, nke ahụ bụ Nna-ukwu, echiche dị iche iche. Hatton gbara aka na 2018 Open Championship (njikọ njikọ) ebe ọ T6, yana T10 n’otu afọ na US PGA. N’ezie, mmadụ anọn’ime ọrụ ise un kachasị elu 10s abịala d e asọmpi abụọ ahụ, nke ọzọ nọ na US Open njikọ-ụdị Shinnecock. Ya only, Agụmakwụkwọ Ocean na Kiawah Island Golf Resort, afọ ndị a US ọnọdụ PGA, na-akọrọ igbe niile ma yie ka ọ dị mma maka Tyrell Hatton iji maa akan’ezie. 49.0 dị ka nnukwu uru iji merie ihe niile, yabụ d e ndọtị nke a Best 20 na-elekwa anya nke ukwuu. 1 nkeji.
Oge that a Brooklyn ụgbụ bụ 3-0 megide Celtics na ha only nke ahụ na-enweghị nnukwu egwu atọ ha, ya bụ Durant, Irving na Harden, na-egwuri egwun’otu egwuregwu ahụ. Nzukọ mbụ ha, Brooklyn meriri 123-95 na nke ahụ bụ Durant na Irving. Na nzukọ nke abụọ, akara ikpeazụ bụ 121-109 na naanị Irving na Harden na-egwu egwu. Nzukọ ha t even nso nso that a hụrụ Brooklyn meriri 109-104 na naanị Irving na-egwu egwu. You nwere ike na-arụ ụka na-edu ndú na-na-nta ma d e niile atọ superstars akpọ na Boston si Jaylen Brown maka ihe dị ka ọnwa atọ, gbakwunyere na eziokwu ahụ bụ na Brooklyn ga-eleghị anya na-eme ka e meere mbụn’ụlọ egwuregwu t a Greatest nke 7 usoro, m na-ahụ un o yikarịrị ka Brooklyn agaghị ebute isi opekata mpe 8. 1 nkeji.
Izu uka that a nke izu that a sitere na vlalwani onye ahọrọla ihe ndị a.
Ezigbo Valladolid na Atletico Madrid – Atletico -1.25 @ 1.76
Atletico ịnọn’elu tebụl na-eche Valladolid nke abụọ na nke ikpeazụ na egwuregwu ikpeazụ nke oge ahụ. Na enweghị asọmpi European ga-egwu maka ha, Atletico ga-egwu otu egwuregwu na-agwa ndị ọzọ okwu iji mee ka ụmụ agbọghọ guzosie ike megide Real Madrid bụ ndị nwere isi 2. Atletico na-egwuri egwu na Valladolidn’oge a wee merie 2-0 ma na-eme nke ọma megide ìgwè ndị na-adịghịn’ụdị. Ebe Valladolid nwere naanị two na-adọta 5 gara aga na Atletico na-elewanye anya karịa, ha ga-achọ ime ka mmalite nke ndu na akara opekata mpe 2.
Ọ bụrụn’ịchọta nhọrọ anyịn’izu a, jiri egwuregwu: 10175439. Nke oma diri gi na izu uka a niile!